ဇီယက်ချ်ရဲ့ ဒဏ်ရာ အခြေအနေ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ တူချယ် - SPORTS MYANMAR
ဇီယက်ချ်ရဲ့ ဒဏ်ရာ အခြေအနေ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ တူချယ်
ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ မနေ့ည က ကစားခဲ့တဲ့ ဥရောပ စူပါဖလား ဗိုလ်လုပွဲမှာ ယူရိုပါလိဂ် ချန်ပီယံ ဗီလာရီးရဲလ် အသင်းကို သာမန် ပွဲချိန် အတွင်း တဖက် တဂိုးစီသရေ ကစားခဲ့ပြီး ၊ ပင်နယ်တီ အဆုံးအဖြတ် ခံယူခဲ့ရာမှာ ၆ – ၅ နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ကာ ၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ဝေးကွာနေခဲ့တဲ့ ဥရောပ စူပါဖလားကို တကျော့ပြန် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီပွဲမှာ ချဲလ်ဆီးတို့ အဖွင့်ဂိုး အရင်စရခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၊ ဟာဗက်ဇ်ရဲ့ ပင်နယ်တီ ဧရိယာထဲ ချိုးပေးမှုကို ဂိုးပေါက် အရှေ့နားမှာ အသင့်ရှိနေခဲ့တဲ့ ဟာကင် ဇီယက်ချ် က ပိတ်သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပထမပိုင်းပြီးခါနီးမှာတော့ ဇီယက်ချ် ဟာ ပခုံးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တာကြောင့် ၊ ခရစ်တီယန် ပူလီဆစ်နဲ့ လူစားလဲခံခဲ့ရပါတယ် ။
ခြေစမ်းပွဲတွေမှာရော ၊ မနေ့ညက ပွဲမှာပါ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ဇီယက်ချ် တယောက် အခုလို ဒဏ်ရာ ရသွားတာဟာ သောမတ်စ် တူချယ် အတွက် ကြီးမားတဲ့ ထိုးနှက်ချက် တရပ် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ ပွဲအပြီး BT Sport ရုပ်သံနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ တူချယ် က ဇီယက်ချ်ရဲ့ ဒဏ်ရာ အပေါ် အခုလိုပဲ မှတ်ချက် ပေးခဲ့ပါတယ် ။
တူချယ် က ” ပထမပိုင်းမှာကတည်းက လူစားလဲမှု တရပ်ကို အသုံးပြုရခြင်းကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကစားသမား တယောက်ရဲ့ ဒဏ်ရာ ဘယ်လောက် အထိ ပြင်းထန်သလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိနိုင်မှာပါ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ခြေစမ်းပွဲတွေမှာ သူဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အဆုံးအဖြတ် ပေးတဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ၊ သူ အခုလို ဒဏ်ရာရသွားတာ အသင်း အဖို့ ကံဆိုးပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဇီယက်ချ် ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီတုန်းကလည်း ဒူးနဲ့ တင်ပဆုံ ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ပြီး ၊ ရာသီ အစောပိုင်းကလွဲရင် ၊ နောက်ပိုင်းမှာ တည်ငြိမ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပြသနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ် ။ တဖက်မှာ တူချယ် ကတော့ မနေ့က ပွဲအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို အခုလိုပဲ ချပြခဲ့ပါတယ် ။
တူချယ် က ” အချိန်ပို ၁၅မိနစ် ၂ပိုင်း ထပ်ကစားခဲ့ရခြင်းဟာ ကြံ့ခိုင်မှု အရ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အဆိုးရွားဆုံး အရာပါပဲ ။ ရာသီသစ်ကို ပထမဆုံး ဆုဖလားနဲ့ အတူ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ခြင်း ကတော့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်း အရ အကောင်းဆုံး အရာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပထမဆုံး အနေနဲ့ ကျွန်တော် တို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် ၄ပတ် အတွင်း ရာသီကြို ပြင်ဆင်မှုကို မနားတမ်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ”
” အခုအချိန်ဟာ ကိုယ်တကယ် အသုံးပြုမယ့် ကစားသမား စာရင်းကို အတည်တကျ ရွေးချယ်ဖို့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီ line-up ကို ဒီနေ့ပွဲမှာ ထုတ်သုံးခဲ့တာပါ ။ အသင်းသားတွေဟာ တယောက်ကို တယောက် မိနစ် မျှဝေပေးဖို့ အတွက် အလိုမရှိကြပါဘူး ။ ဒါကို ပွဲမစခင်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးသားပါ ။ ”
” အသင်းဖော် တဦးဦးကို ကစားခွင့် မိနစ်တွေ မျှဝေပေးမလား ? ဒီ ဗိုလ်လုပွဲကို ရာသီကြို ပြင်ဆင်မှုလို သဘောထားမလား ? ဒါမှမဟုတ် လာမယ့် စနေနေ့မှာ စတင်မယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ရာသီသစ် အတွက် အသင့် ဖြစ်နေကြောင်း ပြမလား ? အဆုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီနေ့ပွဲကို အနိုင်ရဖို့က လွဲပြီး ၊ တခြား ဘာရလဒ်မှ မလိုဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ”
” အာဆင်နယ် ၊ တော့တင်ဟမ် အသင်းတွေနဲ့ ခြေစမ်းပွဲတွေမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပွဲထွက်စာရင်းကို ဒီနေ့ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ချပြခဲ့ပါတယ် ။ ဒါဟာ ကြံ့ခိုင်မှု အရ အဖြစ်နိုင်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ပွဲထွက်စာရင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ရာနှုန်းပြည့် စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီလား ? အဖြေကတော့ No ပါ ။ ”
” ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘောလုံးပွဲ တပွဲကို မြင့်မားတဲ့ အဆင့်အတန်း တရပ်မှာ ကစားနိုင်ဖို့ အသင့်ရှိနေကြပါတယ် ။ ဒီနေ့ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခခံခဲ့ကြရပါတယ် ။ ၃၅မိနစ် နောက်ပိုင်းမှာ အခြေအနေတွေက ပိုပြီး ခက်ခဲခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ ။ မကြာခဏ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဘောလုံး ပျက်တာတွေ ၊ နေရာလွတ်တွေ ပိတ်ဆို့ဖို့ ခက်ခဲမှုတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ် ။ ”
” ကံဆိုးစွာနဲ့ ဒုတိယပိုင်းမှာ ပထမပိုင်း ၃၅မိနစ် အတွင်းက စွမ်းဆောင်ပုံမျိုးနဲ့ ရှေ့မဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် ၊ ပြိုင်ဖက်ကလည်း ချေပဂိုး ရဖို့ ထိုက်တန်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီ အခြေအနေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုက်စစ်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ စိတ်လောနေခဲ့ပြီး ၊ ပြိုင်ဖက်ကိုလည်း တန်ပြန်တိုက်စစ် ကနေ အခွင့်အရေးတွေ ခွင့်ပြုခဲ့မိပါတယ် ။ ”
” ၇၅မိနစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အသင်းရဲ့ တုန့်ပြန်မှု အပေါ် ကျွန်တော် အားရခဲ့ပါတယ် ။ ပွဲကိုလည်း ပြန်လည် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီကနေ မိနစ် ၁၂၀ အထိ ကျွန်တော်တို့ ကစားပုံ ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ ဒီတော့ ဒီနေ့ပွဲကနေ ကောင်းတဲ့ အရာ အများကြီး တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။ ကြံ့ခိုင်မှု အရ ကျွန်တော်တို့ဟာ မိနစ် ၁၂၀ အထိ အပြည့်အဝ ကစားပေးနိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ ကစားသမားတွေကို အသုံးပြုခဲ့ရပါတယ် ။ ”
” ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့်ပွဲမတိုင်မီ ပြင်ဆင်ဖို့ အချိန် ၂ရက်ပဲ ရပါတော့မယ် ။ ဒီတော့ မိနစ် ၁၂၀ အထိ ကစားခဲ့ရတာဟာ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ဘာ အထောက်အကူမှ မပေးပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ပွဲစဉ်ဇယား ရေးဆွဲမှု အတိုင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ခြေစမ်းပွဲ မကစားထားရတဲ့ ကစားသမားတွေလည်း အများကြီး ရှိနေပါတယ် ။ ”
” ဒီလို မိနစ် ၁၂၀ ကစားခဲ့ရခြင်းဟာ ဘာအထောက်အကူမှ မပေးဘူး ၊ ရာသီသစ် အတွက် အသင့်မဖြစ်သေးဘူး ဆိုပြီး ထိုင်ညည်းနေလို့ မပြီးပါဘူး ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါ အပေါ် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ပြုမူရပါမယ် ။ ဒီတော့ လာမယ့် စနေနေ့ပွဲ အတွက် အသင့် ဖြစ်နေကြောင်း ခံယူချက်မျိုး ပြသပြီး ၊ ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့်မှာ အကောင်းဆုံး ပေးဆပ်သွားမှာပါ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။